Baydhabo: Magaalada baydhabo oo xalay dagaal xoogan uu ka dhacay.
Kismaayo: Saldhiga Ciidankii Booliska ee Dawladii Hore oo Dadkii Deganaa Laga Saaray
Magaalada baydhabo oo xalay dagaal xoogan uu ka dhacay.
Wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka Bay ayaa sheegaya in ay xalay saq dhex dagaal uu ka qarxay magaalada gudaheeda ayna ku dhinteen ugu yaraan 15 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 40 qofood oo iskugu jira dad rayid ah iyo garabyadii uu dagaalku ka dhaxeeyay waxaana ku barakacay dadkii deegaanka.
Sababta dagaalkan ayaa ka dambaysay sida ay wararku sheegayaan kadib markii ay xalay goor dambe weerar ku soo qaadeen magaalada gaar ahaan halka uu dagan yahay Xildhibaanka Ibraahim xaabsade ee Badhabo maliishiyaad ka amarqaata wasiiro ka mid ah Dowlada F.Somaliya Aadan Madoobe iyo Shaati gaduud oo horay colaad ay uga dhaxaysay iyaga iyo Ibraahim Xaabsade muddo hadda laga joogo laba biloodna laga saaray magaalada.
Mas'uul u hadlayay garabka xaabsade ayaa sheegay in iyaga ay hadda gacanta ku hayaan magaalada Baydhabo, kana saareen maliishiyaadkii soo weeraray magaaladuna ay hadda dagan tahay, dadkuna ay dib ugu soo laabanayaan guryihii ay xalay ka qaxeen,waxa uuna intaas ku daray in wali ay ku jiraan is difaacid si uusan mar kale dagaal uga dhicin magaalada gudaheeda.
Dowladda F.Somaliya ee KMG ah ayaa la qorshaynayaa in maalmaha soo socda ay u guuraan magaalada baydhabo ee xarunta u ah gobolka Bay,waxaana soo baxayay maalmihii la soo dhaafay hadalo uu bixinayay Xaabsade oo ahaa in aysan dowladu cag soo dhigi karin magaalada Baydhabo iyadoo aysan isla ogolaanin Baarlamanka haddii ay yimaadana waxa uu sheegay in dhibaato xoogani ay ka qabsan doonto Dowlada soo dagista magaalada baydhabo.
Mas'uuliyiinta ugu sareysa dowlada ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa sheegay in xiisahaha ka jira baydhabo aysan ka reebi doonin Go'aankooda ah in ay u guuraan magaaladaas kana howlagalaan,waxa ayna intaas ku dareen in ay xalin doonaan khilaafyada siyaaasadeed ee ka jira magaaladaas.
Maamulka isbahayasiga dooxada jubba oo alaabtooda ka daadgureeyey dadkii daganaa guryahii ahaa xerada booliska ee dowladii hore ee soomaaliya.
Dadkaan shalay laga saaray guryahii hore dowlada ee ahaan jiray xeradii booliska soomaaliya ayaa waxa ay ka danbaysay kadib markii amar ka soo baxay maamulka sare ee isbahaysiga dooxada jubba lagu sheegay in la faarujiyo oo ay ka guuraan dadka shacabka ah ee dagan guryahii hore ee dowlada gaar ahaan bartii ahaan jirtay xerada booliska soomaaliyeed oo ku taala magaalda kismaayo.
Dadkaan laga saaray guryaha ayaa waxaa loo qabtay waqti gaaraya afar iyo labatan saac in ay oga baxaan guryahaan islamarkaana ay raadsadaan gurya kale oo hoyaatin u noqda ayadoo ay shalay ku ekayd waqtigii afar iyo labaatankla saac ahaa ee loo qabtay dadkan dagan guryahii xerada booliska ee magaalda kismaayo.
Hadaba waxaa muuqanayay geedi xoog leh oo ka soconayaya guryaha ay daganaayeen dadkaan ayagoo ay jiraan dad diiday in ay ka guuraan guryaan balse la sheegay in ay xoog oga saareen ciidanka booliska oo halkaa ku suganaa islamarkaana sugayaya amaanka dadkaan ka guuraya xerada .
Dadkaan daganaa saldhigii hore ee booliska ayaa waxa uu maamulka isbahasyiga dooxada jubba u balan qaaday calaa qoys in uu siin doono lacag gaaraysa ilaa $105 doolar oo u dhiganta 160,0000 oo lacag soomaali oo ay isaga bixin doonaan lix bilood oo kiro ah guryaha ay dagi doonaan iyo waliba gaawaridii ay ku guuri lahayeen ayadoo loo sheegay qofkii u hogaansami waaya awaamiirta maamulka isbahaysiga dooxada juba islamarkaana isku dhajiyaa guryaha in qasab looga soo saari doona alaabtisana banaanka loogu soo daadin doono ayadoo dadkan dagan guryahana ay yahiin kuwo iska danyar ah oo aan awoodin in ay iska bixiyaan lacagta kirada guryaha ayadoo qaar ka mid ah dadkan dagan guryaha ay yahiin kuwo daganaa guryahan mudo 14 sano halka qaar ka kalena ay sheegeen in ay daganayeen mudo sodon sano ah islamrkaana ay ahaayeen qoysaskii ragii ka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliyeed .
Hadaba maamulka isbahaysiga dooxada jubba ayaa sheegay in ay kaga golleeyahiin arintaan lagaga saarayo dadka guryahii hore ee booliska in ay tahay mid loogu sii gogol xaarayo ku howl galida booliskii hore ee soomaaliya oo la filayo in dhawaan la diiwaan galiyo halka kuwa hada diiwaan gashana lagu sii tabab bari doono loona furi doono siminaaro iyo aqoon kororsi xaga boolis nimada ah.
Isku soo wada duuboo arintaan guryo kasaarida dadkii daganaa xeradii ciidanka booliskii hore ayaa waxa ay ku soo beegantay xili u wasiirka dib u dhiska iyo dib u dajinta dowlada FDKMG ah ee somaaliyeed xildhibaan Barre aadan shire (Barre hiiraale) uu ka wado gudaha magaalda kismaayo howlo dib u dhis iyo dib u dajin isugu jirta islamrkaan ay ka mid ahayd meelaha ay dhawaan howlaha dib u dhiska ka socdeen Airport ka magalada kismaayo, dakada iyo waliba isbitaalka guud ee magaalada kismayo ayadoo hadana uu sheegay in uu shaqo dib u dhis ku bilaabayo xerada hada laga saray ee ahayed saldhigii hore ee booliska soomaaliya.
Waraysi dheer oo uu Madaxweynaha DGPL siiyey Telefishanka ETN ayuu shaaca kaga qaaday in... Guji...
C/Laahi Yuusuf oo Kusoo Laabtay Nairobi
iyo Ergadii shirka dib u Heshiisiinta oo ku laabanaya dalka Somaliya Marxalado Adag ka dib... Guji.. May 29